फेसबुकबारे यी तथ्य जानी रा्खाै | Mirmee.com
फेसबुकबारे यी तथ्य जानी रा्खाै
कुरा गरौं फेसबुकको । किनकि इन्टरनेटको पहुँच भएर पनि फेसबुक नचलाउने मानिस संसारमा विरलै छन् । यसले मानिसलाई भर्चुअल रूपमा नजिक ल्याउन ठूलो भूमिका पनि खेलेको छ । त्योबाहेक फेसबुकसँग प्रयोगकर्तासम्बन्धी यथेष्ट जानकारी पनि छ । कसरी त ?
-प्रयोगकर्ताको के–के जानकारी फेसबुकसँग छ भनेर बुझ्न आफ्नो जानकारी आफैं डाउनलोड गरी हेर्दा पनि थाहा पाइन्छ । यसका लागि ब्राउजरबाट फेसबुकको सेटिङ मेनुमा जानुपर्छ, जहाँ तलपट्टि डाउनलोड कपी भन्ने अप्सन राखिएको छ । डाउनलोड अप्सनमा गएर फेसबुकसँग भएको आफ्नो जानकारी डाउनलोड गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । केहीबेरपछि प्रयोगकर्ताको इमेलमा डाउनलोड गर्ने लिंक आइपुग्छ । त्यसलाई डाउनलोड गरेपछि त्यसमा आफूसम्बन्धी जानकारी खोज्न सकिन्छ ।
-प्रयोगकर्ता आफंैले फेसबुकमा अपलोड गरेका सबै फोटो र भिडियो त भेटिन्छ नै, त्यसबाहेक प्रयोगकर्ताले गरेका च्याटहरूसमेत संगृहीत छन् । प्रयोगकर्ताले आफ्नो म्यासेन्जरबाट डिलिट गरेको च्याटसमेत त्यहाँ पढ्न सकिन्छ ।
-प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा सेभ गरिएको फोन नम्बर र इमेल ठेगानासमेत फेसबुकसँग सुरक्षित रहन्छ ।
-प्रयोगकर्ताले फेसबुकमा गर्ने क्रियाकलापको आधारमा फेसबुकले उनीहरूले के मन पराउँछन्, मन पराउँदैनन् भन्ने डाटाबेससमेत तयार पारिएको हुन्छ ।
-प्रयोगकर्ताले कुन फोन बोक्छन्, उनीहरूले कतिबेला फेसबुकमा समय बिताउँछन्, कस्तो एप प्रयोग गर्छन् भन्ने जानकारीसमेत फेसबुकले राख्छ ।
← फेसबुक र गुगललाई प्रश्न: हाम्रा जानकारी के गर्छौ ?
दुर्घटनामा परे गायक राजेश पायल राई, अवस्था गम्भीर →